ဈေးကွက်များ နှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုအကြောင်း ပြောဆိုခြင်း (Talking abour markets and competition) - Myanmar Network
ဈေးကွက်များ နှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုအကြောင်း ပြောဆိုခြင်း (Talking abour markets and competition)
Posted by Language Republic on January 9, 2013 at 10:42 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
A. Where are your biggest markets? (ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အကြီးဆုံးဈေးကွက်တွေက ဘယ်မှာလဲ?)
B. In terms of sales by region, Europe is by far the biggest market with 60 per cent of our total sales. North America accounts for 15 per cent, Asia-Pacific is 10- per cent - Chinese market is particularly strong, South America is 8 per cent and the rest of the world is7per cent. (ဒေသအလိုက်အရောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ပြောရရင် ဥရောပကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စုစုပေါင်းအရောင်းအား ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အကြီးဆုံးဈေးကွက်ပါပဲ။ မြောက်အမေရိက ကတော့ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသကတော့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ် - တရုတ်ဈေးကွက်ကတော့ အထူးပဲ ခိုင်မာပါတယ်။ တောင်အမေရိကကတော့ ၈ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာရဲ့ ကျန်ဒေသများကတော့ ၇ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။)
in terms (of) သည် အသုံးဝင်သော စကားစုဖြစ်သည်။
- What does that mean in terms of employment? (အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းအရဆိုရင် အဲဒါက ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ?)
- In terms of profitability, it means that… (အကျိုးအမြတ်အရ ပြောမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါကတော့ …. လို့အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။)
- Can you give us the figures in percentage terms? (ကိန်းဂဏန်းတွေကို ရာခိုင်နှုန်းအရ ပေးနိုင်မလား?)
ဆိုလိုရင်းကတော့ မြောက်အမေရိကဟာ အရောင်းအားရဲ့ တစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြု/ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
A. I think you’d better write that down for me! Why are things going so well in China? (အဲ့ဒါတွေကို ကျွန်တော့အတွက် ခင်ဗျား ချရေးပေးမှဖြစ်မယ်ထင်တယ်! ဘာကြောင့်များ တရုတ်ပြည်မှာ အရာရာ အဆင်ပြေနေတာလဲ?)
B. The Chinese economy is booming and we haveavery good sales force there. (တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးက ထိုးတက်လာတယ်လေ ပြီးတော့ အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရမ်းကျွမ်းကျင်တဲ့ အရောင်းတပ်ဖွဲ့ရှိတယ်လေ။)
ဈေးကွက်ရဲ့ အခြေအနေကို ဖော်ပြသည့် အသုံးအနှုန်းအချို့ -
- Demand is strong. (၀ယ်လိုအားများတယ်။)
- Demand is very weak. (၀ယ်လိုအားက အရမ်းနည်းတယ်။)
- There isasteady demand in Australia. (သြစတြေးလျမှာတော့ ၀ယ်လိုအားက ပုံမှန်ရှိနေပါတယ်။)
- The market for our products is growing /falling. (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်အတွက် ဈေးကွက်ကတော့ ကြီးမား/ဆုတ်ယုတ် နေပါတယ်။)
The competition (ယှဉ်ပြိုင်မှု)
A. Who are your main competitors? (ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အဓိက ပြိုင်ဖက်တွေက ဘယ်သူတွေလဲ?)
B. It depends on the region. There arealot of local producers in Europe and we cannot compete with them on price. However, our reputation for service is excellent. We are well known in the market for high quality and reliability. (အဲ့ဒါကတော့ ဒေသအပေါ်မှာ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဥရောပမှာ ဒေသတွင်းထုတ်လုပ်သူတွေ အများကြီးရှိပြီး ကျွန်တော်တို့က ဈေးနှုန်းနဲ့ပါတ်သက်လာရင်တော့ သူတို့ကို မပြိုင်နိုင်ပါဘူး။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကတော့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဈေးကွက်အတွင်းမှာတော့ အရည်အသွေးကောင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်လို့ နာမည်ကြီးပါတယ်။)
ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် ပါတ်သက်သော အသုံးအနှုန်းများ -
- But we can compare with them in terms of service/speed of delivery. (ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က သူတို့နဲ့ ၀န်ဆောင်မှု/ပို့ဆောင်မှုနှုန်းနဲ့တော့ ယှဉ်နိုင်ပါတယ်။)
- Our prices are very competitive. (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဈေးနှုန်း တွေက ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။)
- We’ve become very uncompetitive in that market. (အဲ့ဒီဈေးကွက်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ယှဉ်ပြိုင်လို့မရသလောက် ဖြစ်လာပြီ။)
ဂုဏ်သိက္ခာကို ဖော်ပြနိုင်သော အသုံးအနှုန်းများ -
- We haveagood reputation. (ကျွန်တော်တို့မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်။)
- We have an excellent name. (ကျွန်တော်တို့မှာ နာမည်ကောင်းရှိတယ်။)
- Everyone knows us. (လူတိုင်းကျွန်တော်တို့ကို သိတယ်။)
- We are well established in the market. (ဈေးကွက်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ကောင်းကောင်း အခြေခိုင်နေပြီ။)
A. What about the Japanese market? (ဂျပန်ဈေးကွက်ကရော ဘယ်လိုလဲ?)
B. We cannot compete in Japan. High transport costs make it very unprofitable to do business. Maybe things will change in the future. (ဂျပန်မှာတော့ မယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဘူး။ မြင့်မားတဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုစရိတ်က အမြတ်ရစေမယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အနာဂတ်မှာတော့ အရာရာ ပြောင်းလဲချင်လဲမှာပေါ့။)
အမြတ် နှင့် အရှုံးအကြောင်းပြောခြင်း -
- It’savery profitable business. (ဒါကတော့ အရမ်းကို အကျိုးအမြတ်ရှိနိုင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပဲ။)
- We’re not making much profit. (အများကြီး အမြတ်မရပါဘူး။)
- We’re makingaloss (အရှုံးပေါ်နေပါပြီ။)
- We’re finally makingaprofit. (နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်တို့ အမြတ်ရလာပြီ။)
သယ်ယူပို့ဆောင်မှု စရိတ်ကို ဗြိတိသျှလို လို့ Transport costs လို့ခေါ်ပြီး အမေရိကန်လိုကိုတော့ Transportation costs လို့ခေါ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ အရှုံးပေါ်နေပြီကို ဗြိတိသျှတွေက We're makingaloss လို့ခေါ်ပြီး အမေရိကန်တွေက We're operating ataloss/we're takingaloss လို့ပြောပါတယ်။
Permalink Reply by Thike Htun on January 9, 2013 at 14:14
Permalink Reply by Ratan Biswas on January 9, 2013 at 14:27
Permalink Reply by Patricia Myint on January 9, 2013 at 20:47
more than thank you for this post. it is really helpful for me at work. i want to know more about this please keep continuing for this post. i am looking forward to learn this lesson. thanks again.
Permalink Reply by thinnthinnhtay on January 9, 2013 at 21:08
Permalink Reply by Yin Min Myint Z∂w on January 9, 2013 at 22:05
Permalink Reply by padout,layy on January 10, 2013 at 4:17
Permalink Reply by cherryeino on January 10, 2013 at 16:47
Permalink Reply by Htun Htun Soe on January 11, 2013 at 16:03
Permalink Reply by yi may phyo on February 16, 2013 at 13:25
Thank and hope to send this later
Permalink Reply by san san on November 28, 2014 at 15:53